Annaga nagu saabsan - Beijing Stelle Laser Technology Co., Ltd.
Hal qayb oo ka mid ah Beijing Stelle Laser Technology Co., Ltd.
Beijing Stelle Laser waa shirkad soo saarta qalabka qurxinta ee R&D oo ku taal Beijing, caasimadda Shiinaha.Badeecadayadu waxay dabooshaa mashiinka timaha ka saarida diode laser 808nm iyo mowjadaha saddexlaha ah, mashiinka dib u kicinta maqaarka E-light IPL SHR OPT, mashiinka saarista tattoo nd yag laser, mashiinka slimming cryolipolysis, mashiinka dib u habeynta maqaarka ee jajabka CO2 laser iwm ..
Noocyada kala duwan ee badeecada, moodooyinkayada ugu caansan waa mashiinada laxiriira diode laser, sida laser diode laser + nd yag laser oo leh 2 gacan, laser diode vertical + Elight + nd yag laser + 980nm vascular oo leh 4 gacan.
Dhanka kale, jiilka 3-aad ee cusub ee mashiinnada laser diode caqli-gal ah ayaa durba si dhakhso ah u qabsaday suuqa iyagoo leh astaamo aqoonsi oo gaar ah oo caqli-gal ah, tabaha daaweynta 3 ee la beddeli karo iyo shaashadda weyn ee LED.Waxay isticmaashaa tikniyoolajiyad sare oo horumarsan waxayna horseed u tahay jiil cusub oo mashiinka laser diode ah.
Shirkaddu waxay ku fadhidaa dhul dhan 580 sqm.Awood wax-soo-saarka sannadlaha ah waa 3000 oo qaybood.Sababtoo ah kooxdayada cilmi-baarista madax-bannaan iyo horumarinta, shaqaale si fiican u tababaran, iyo nidaamka xakamaynta tayada adag ee habsocod kasta - laga bilaabo soo saarista alaabta, isu-ururinta, tijaabinta ilaa baakadaha, mashiinadayadu waxay ammaan sare ka helaan macaamiisha adduunka oo dhan tayada iyo saamaynta.
Wax-soo-saarka Sannadlaha ah
24 Saac Online
Guusha mustaqbalka fog ee macaamiisha waa aasaaska wax kasta oo aan sameyno.Adeegeena caalamiga ah ee iibka kadib waa saacad walba.Xirfadlaha Stelle Laser iyo xamaasadda adeegga iibka ka dib dadku waxay bixin doonaan adeegyada saxda ah iyo waqtiga loogu talagalay caqabadaha farsamo ee maalinlaha ah ee gudaha ama ka baxsan muddada dammaanadda. Mar kasta iyo meel kasta oo aad u baahan tahay, adeegyada Stelle Laser ayaa halkaas joogi doona.
Suuqa Caalamiga ah
Waxaan go'aansanay in aan siino macaamiisha caalamiga ah alaabada ugu sareysa, adeegyada OEM / ODM iyo saacadaha 24 ee adeegga iibka kadib adeegga iibka. Iyadoo shatiga dhoofinta, mashiinnadayada ayaa loo dhoofiyay in ka badan 70 waddan oo Yurub ah, Bariga Dhexe, Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Aasiya, Afrika iyo Australia iwm.., Stelle Laser si daacad ah ayaa rajeynaya inay kula shaqeeyaan!